Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Linux Mint 20 - LinuxCapable
October 12, 2021 October 7, 2021 by Jọshụa James
Wụnye 5.14 Generic kernel sitere na PPA
Linux kernel 5.14 apụọla yana ọtụtụ atụmatụ, nkwado na nchekwa ọhụrụ. Mwepụta kernel Linux 5.14 agabigala ndị ntọhapụ asaa n'ime ọnwa abụọ gara aga yana rite uru site na ntinye aka nke ndị nrụpụta 1,650 dị iche iche. Ndị na-enye aka na mmepe kernel Linux gụnyere ndị na-enye aka na ndị na-ere ahịa a ma ama dị ka Intel, AMD, IBM, Oracle, na Samsung.
Ị ga-aga nke ọma arụnyere Linux Kernel 5.14 kachasị ọhụrụ na sistemụ Mint Linux gị na njedebe nkuzi.
Iji wụnye kernel Linux 5.14 bụ ịwụnye Ubuntu ppa: tuxinvader/lts-mainline by TuxInvader. Nke a nwere ụfọdụ kernel 5.14 kachasị ọhụrụ na-ewulite ma na-emelite ya mgbe niile. Ihe ndọghachi azụ bụ nke a bụ PPA a na-atụkwasịghị obi, ma nyere akụkọ ihe mere eme nke PPA, ọ dị mma dị ka onye ọ bụla ọzọ a ma ama iji wụnye ma nye ya kernel ule; ị gaghị etinye nke a na sistemụ nwere mmetụta ma ọ bụ mmepụta ihe ọ bụla.
Nke mbụ, wụnye PPA LTS-Mainline:
Ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma, ị ga-ahụ nsonaazụ na-esote na-egosi na ebubatakwala igodo GPG.
Na-esote, melite ndepụta nchekwa gị iji gosipụta PPA ọhụrụ.
Na-esote, wụnye 5.14 jeneriki kernel ọkwọ ụgbọala:
Ozugbo ịbanye na sistemụ Mint Linux gị, gbasoo iwu na-esonụ iji kwado ụdị kernel na-agba ọsọ.
Dị ka e kwuru n'elu, ị nwere arụnyere Linux Kernel 5.14 site na Tuxinvader PPA. Maka mmelite n'ọdịnihu, mee ihe iwu mmelite dabara adaba, a ga-egosipụtakwa ihe nrụpụta ọhụrụ ọ bụla na-akpaghị aka, usoro a dịkwa ka ngwugwu ọkọlọtọ ọ bụla arụnyere.
Ị mụtala ka esi etinye kernel 5.14 kachasị ọhụrụ na Linux Mint 20 gị na nkuzi. Mara, ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị ugbu a na-ebu Linux Mint ma ọ bụ jiri ụdị HWE maka nkwụsi ike kachasị.
Maka ndị na-achọ ịnwale kernel 5.14, ị nwere ike ịghaghachi azụ na kernel ndị gara aga n'ụzọ dị mfe na menu buut, yabụ ịnwale ya abụghị echiche ọjọọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwetara ngwaike ọhụrụ nke anaghị akwado ya na ndabara ngwugwu. kernel.
1 echiche na "Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Linux Mint 20"
October 12, 2021 na 12: 20 pm